Mawduucyada - Akhriska maskaxda ee internetka
Akhrinta maskaxda internetka > Articles
Megan Waxaa laga yaabaa 9, 2019 Leave a Comment on Oranum.com kuuboonada qiimo dhimista & lambarrada ogeysiiska
Akhriska maskaxda ayaa noqon kara mid ka mid ah waayo-aragnimada ugu iftiinka badan ee aad yeelan doonto. Sidoo kale waa mid aad isugu dhow, sidaa darteed ku raaxeysiga akhristaha waa muhiim. On Oranum, waxaad awoodi kartaa […]
Megan October 31, 2018 Leave a Comment MAALINTA LAGA HELO LACAGTA IYO CASHAASHA BILAASHA AH
Naadiyada khamaarka ee hoosta laga duubay waxay bixiyaan "Lacag Lacag La'aan Ah Oo Bilaash Ah" Looma Baahan Yahay In Deposit Loogu Baahan Yahay, markaad ogolaato inaad aqbasho koonto lacageed oo dhab ah. Isku day inaadan dhib ku helin fursadda aad isku daydo […]
Majiraan gunooyin deebaaji ah 2019 Ammaan malahan in la yiraahdo waxaad diyaar u tahay inaad bilowdo sharadka? Waxaad ubaahantahay abaalmarin naadi oo khamaaris ah marka hore. Ma jirto sabab qasab ku ah diiqadda, […]
3 Xeerarka Cuntada iyo Cuntada ee Wanaagsan ee Hagaajinta Dhexdhexaadinta iyo Awoodaha Maskaxda
Megan March 11, 2017 Leave a Comment on 3 Cuntada ugu Fiican iyo Xeerka Cuntada si loo hagaajiyo Dhexdhexaadintaada iyo Caqliga Maskaxda
Uma baahnid inaad kujirto cunto gaar ah si aad ugula xiriiraan Ruux. Waxaad kuxirankartaa Ruux shaah weyn oo Arizona ah, Cunto Coke iyo [a]
5 Waxyaabaha ku xiri kara awoodaada maskaxda
Megan March 11, 2017 Leave a Comment on 5 Waxyaabaha ku xiri kara awoodaada maskaxda
Marka ay timaado horumarinta awoodaha maskaxda, dadka badankood waxay diiradda saaraan waxa ay sameyn karaan si ay u xoojiyaan awooddooda maskaxeed. Si kastaba ha noqotee, qaar badan ayaa sameynaya waxyaabo xaqiiqda, ay gaabinayaan […]
COFFEE: DAWLADDA DHIBAATOOYINKA MAALINTA AH
Megan March 11, 2017 Leave a Comment on COFFEE: DADKA AAD LAHAYN Daawada Dunida
SU'AAL: "MAANTA WAXA LOO TALIYAY INAY NOQOTO MAALINTII UGU HOREEYSAY QAXOOD la'aan - WAXAN KA DHIGAY 9AM. KADIB, SIDII AAN U CABAyay, AYAAN KU AKHRIYAA COLUMNKAAGA Erayadan [SE]
Khamriga - Tilmaamaha Metaphysical ee Bogsashada
Megan March 11, 2017 Leave a Comment ku saabsan Khamriga - Hagaha Metaphysical ee Bogsashada
Dad badan oo aan ogahay waxay ahaayeen, ama waxay ku tiirsan yihiin khamriga si ay nolosha ugu maraan. Waqti kadib, waxaan ka booday xanaaq cad oo khamri-cabeyaasha ah si aqbalitaan dadban iyo dib ugu noqoshada […]
4 Calaamadaha Waxaad Maqnaan Kartaa Maanka
Megan March 11, 2017 Leave a Comment on 4 Calaamadaha Waxaad noqon kartaa Maskax ahaan
Saxeex # 1: Laba Muraayadood oo Khamri ah ayaa kaa dhigaysa mid si xeel dheer u indha indheysa Weligaa ma maqleysaa dad si lama filaan ah "u arka" xalka dhibaatada marka ay nasanayaan oo aysan si firfircoon maskaxdooda u mashquulin? […]
Miyuu khamrigu caawiyaa ama ma joojiyaa kartida maskaxda?
Megan March 11, 2017 Leave a Comment on Caawinta khamriga ama ma joojiso kartida maskaxda?
Awooda maskaxeed waxay noogu yeereysaa inaan ka feejignaano isbedelada dahsoon ee ka socda deegaankeena iyo waxa aan ku soo qaadaneyno si miyir qab ah halkii aan ka arki laheyn caqligal […]
Cilmi-nafsi-yaqaanka Maqnaanshaha khamriga iyo takoorka
Megan March 11, 2017 1 Comment on Psychics Waa Caqli leh Khamriga iyo Maandooriyaha
Hagaag, aan ahaado kan ugu horeeya ee dhahaya MAYA MAYA mowduuc caan ah. Hadaad aqriso cinwaanka oo aad gariirto, waa wax la fahmi karo. Si kastaba ha noqotee, aan eegno […]
8 Xeerarka Nabadgelyada Shaqada
Megan March 11, 2017 Leave a Comment on 8 Xeerarka Shaqada Nabad Sugida
Shaqada maskaxiyan ama mid ruuxi aha maahan oo kaliya ku fadhiisiga kursigaaga, iyo ku celcelinta jimicsiyada qaarkood. Waxaan ula jeedaa, waxay ku saabsan tahay waxyaalahan, laakiin waxay u baahan tahay wax ka badan fadhi keliya. […]
Farqiga Dhexdhexaadinta iyo Aqoonsiga
Megan March 6, 2017 Leave a Comment on Difaaca u dhaxeeya Premonition iyo Precognition
Waxaa jira farqi aad u kala duwan oo u dhexeeya Premonition iyo Precognition; inkasta oo ay dabeecadda isku mid yihiin labadan awoodood ayaa leh hal farqi. Si aan tan si fiican u fahmo, aan marka hore bilaabo […]
Farqiyada Dhexdhexaadinta Dhaqan ahaaneed iyo Khiyaanooyinka Khiyaanada
Megan March 6, 2017 Leave a Comment kala duwanaanshaha u dhaxeeya Cilmi-nafsiga Mustaqbalka iyo Khiyaanada
Waa xaqiiqo naxdin leh in la ogaado in warshadaha maskaxda ee maanta, afartii qofba oo isugu yeera naftooda ugu yeeraan akhristeyaal maskaxeed ama dhexdhexaad ah, laga yaabee kaliya hal [
Sida loo doorto Maskaxda
Megan March 6, 2017 Leave a Comment on Sida loo doorto Maskaxda
Sidee qofku ku heli karaa maskax wanaagsan? Goobta lambarka koowaad waxay u badan tahay gudbin. Ereyga afka, sida helitaanka ganacsi kasta oo wanaagsan, ayaa laga yaabaa inuu yahay habka ugu wanaagsan ee lagu khamiiriyo…
Muuqaalka Sawirada, Qalabka Xawaaraha iyo Muuqaal Dibedda ah
Megan March 6, 2017 Leave a Comment on Muuqaalka Sawirada, Synesthesia iyo View Remote
Waxaan dhawaanahan dhageysanayay wareysi nin lahaa "xusuusta sawirada". Waxa aan ka helay xiisaha ay u leedahay faahfaahinta uu ka bixinayo hadiyadan / kartidan ayaa ahayd inay ahayd […]
Miyaan ahay Maskax ama Dhibaato Ka timaada Schizophrenia?
Megan March 6, 2017 Leave a Comment on I Miisaaniyad ama Caabbiimad ka timid Schizophrenia?
Waxaan ka helnay qoraallo fara badan oo ka imanaya dadka layaaban haddii ay yihiin maskax / dhexdhexaad ama shisoofrani. Tani waa mid la fahmi karo iyadoo la tixgelinayo astaamaha cudurka dhimirka ee schizophrenia waa maqalka codadka dabcan labadaba maskaxiyan […]